စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေ အတွက် အဝတ်အထည် နဲ့ အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ “နေထက်လင်း” – GaMone Media
Homepage / Celebrity / စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေ အတွက် အဝတ်အထည် နဲ့ အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ “နေထက်လင်း”
စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေ အတွက် အဝတ်အထည် နဲ့ အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ “နေထက်လင်း”
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေနဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို နှစ်အတော်ကြာတဲ့အထိအခိုင်အမာရရှိထား သူကတော့ ဝါရင့်အနုပညာရှင်မင်းသားကြီး နေထက်လင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ နေထက်လင်းကတော့ လှူဒါန်းမှုတွေဆက်တိုက် ပြုလုပ်ကာ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ အသက်ပေးကျဆုံးသွားကြတဲ့ လူငယ် သူရဲကောင်းတွေအတွက်လည်း စိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ပြည်သူအတွက်အားဖြည့်ပါဝင်နေတဲ့ နေထက်လင်း ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် အဝတ်အထည်နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်..။
စစ်ဘေးရှောင်ပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အဝတ်အထည်၊ စာရေးကိရိယာ၊ ကလေးများအတွက်အရုပ်နဲ့ အခြားအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို အခြားအလှူရှင်တွေနဲ့အတူ စုပေါင်းပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ “ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ မဏီရတနာကျောင်းတိုက်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွင် ဒီကနေ. အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးအားအမှူထား၍ ရန်ကုန် အလိုတော်ပြည်ကျောင်းတိုက်ရှိ လက်ထောက်ဆရာတော် ဦးဇင်းဘီလူး(ခ)ရှင်ကုမာရ နှင့်
ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် နေထက်လင်း/ဆုဒါလီ/ကိုသန်းဆွေ/ကိုရိုင်တာနှင့်ကွီးဖိုးဇော်တို့မှာ လူကြီးနှင့်ခလေးများအတွက် အဝတ်အထည်/စာအုပ်စာတန်း/ခလေးရုပ်များ/ကလေးတွေနဲ.ပတ်သက်သော အရာများစွာကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ လှူဒါန်းမှူအစုစု တို့ကို သာဓု၃ကြိမ် ခေါ်စေသော် 🙏🙏🙏 ယနေ့ စစ်တွေမြို့ရှိ စစ်ဘေး/တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများ ခိုလှုံနေရာတွင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အနန္တသတ္တဝါတွေ ဘေးရန်ကင်းပချမ်းသာကြပါစေ။ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ🇲🇲😍🙏..” ဆိုပြီး အလှူအကြောင်း ကို အသိပေး ပြောပြထားတာပါ..။ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းဖေးမကူညီမှုတွေနဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နေထက်လင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေကတော့ နှစ်သက်ကြည်နူးစရာကောင်းတာမို့ ပရိသတ်တွေလည်း သာဓုခေါ်ဆုတောင်းပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ႏိုင္မႈေတြနဲ႔ အက္ရွင္ဇာတ္ကားၾကမ္းၾကမ္းေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕အားေပးခ်စ္ခင္မႈေတြကို ႏွစ္အေတာ္ၾကာတဲ့အထိအခိုင္အမာရရွိထား သူကေတာ့ ဝါရင့္အႏုပညာရွင္မင္းသားႀကီး ေနထက္လင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ ေနထက္လင္းကေတာ့ လႉဒါန္းမႈေတြဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ကာ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးမွာ အသက္ေပးက်ဆုံးသြားၾကတဲ့ လူငယ္ သူရဲေကာင္းေတြအတြက္လည္း စိတ္ထိခိုက္ခံစားေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္..။ လႉဒါန္းမႈေတြနဲ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ျပည္သူအတြက္အားျဖည့္ပါဝင္ေနတဲ့ ေနထက္လင္း ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ အဝတ္အထည္နဲ႔ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္..။
စစ္ေဘးေရွာင္ၿပီး အခက္အခဲေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အဝတ္အထည္၊ စာေရးကိရိယာ၊ ကေလးမ်ားအတြက္အ႐ုပ္နဲ႔ အျခားအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြကို အျခားအလႉရွင္ေတြနဲ႔အတူ စုေပါင္းၿပီးကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ “ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ မဏီရတနာေက်ာင္းတိုက္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတြင္ ဒီကေန. အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ႀကီးအားအမႉထား၍ ရန္ကုန္ အလိုေတာ္ျပည္ေက်ာင္းတိုက္ရွိ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဦးဇင္းဘီလူး(ခ)ရွင္ကုမာရ ႏွင့္
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ေနထက္လင္း/ဆုဒါလီ/ကိုသန္းေဆြ/ကို႐ိုင္တာႏွင့္ကြီးဖိုးေဇာ္တို႔မွာ လူႀကီးႏွင့္ခေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အထည္/စာအုပ္စာတန္း/ခေလး႐ုပ္မ်ား/ကေလးေတြနဲ.ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားစြာကို သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ လႉဒါန္းမႉအစုစု တို႔ကို သာဓု၃ႀကိမ္ ေခၚေစေသာ္ 🙏🙏🙏 ယေန႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေဘး/တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား ခိုလႈံေနရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အနႏၲသတၱဝါေတြ ေဘးရန္ကင္းပခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ျမန္မာျပည္ႀကီး အျမန္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ🇲🇲😍🙏..” ဆိုၿပီး အလႉအေၾကာင္း ကို အသိေပး ေျပာျပထားတာပါ..။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေဖးမကူညီမႈေတြနဲ႔ လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေနထက္လင္းရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကေတာ့ ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတာမို႔ ပရိသတ္ေတြလည္း သာဓုေခၚဆုေတာင္းေပးထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။
Previous post သားငယ် သတိရလာတော့ မေးတယ် မေမေ ဖေဖေ သား ညာဖက် လက်ကလေး ဘယ်ရောက် သွားလဲ? သားလက်ခလေးရောတဲ့
Next post အိမ်ရှေ့ အမွှေး တိုင် ထွန်းခြင်း (သို့) နာနာ ဘာဝတွေ ကို ဖိတ် ခေါ် နေတဲ့ အယူအဆ တခု